Izicelo zeselula zokusebenzisa amakhuphoni edigital digital | Izindaba zamagajethi
Izicelo eziyi-11 zeselula ezizosisiza ukuthi songe imali
Ukusetshenziswa kwamadivayisi wethu weselula akudingeki ukuthi kugxile ebuhleni bobuchwepheshe babo kuphela, kodwa kunalokho ekwazini ukuthi ungakusebenzisa kanjani njengesisekelo somsebenzi wethu wansuku zonke. Ukusebenzisa inombolo ethile yezicelo zeselula kungaba lusizo uma sazi khetha lezo ezisisiza ukuthi songe imali.
Le ndatshana inikezelwe ngokunembile kulokhu, okungukuthi, ukuzama ukwazi yiziphi izinhlelo zokusebenza zeselula ezingasisiza ngenombolo ethile yokunikezwayo, ukukhushulwa kanye nokulingana, ukwazi ukuphatha umnotho wethu kahle.
1 Izicelo zeselula zokukhetha amakhuphoni edigital digital
1.1 1, Ikhuphoni Sherpa
1.2 2. Uhlelo Lokusebenza Lwamakhuphoni
1.3 3. I-RetailMeNot
1.5 5. Ukuphuma51
1.6 6. UkhiyeRing
1.7 7. ICartwheel nguTarget
1.8 8. IsitoloSavvy
1.10 10. IGesiBuddy
1.11 11. Hlola
Izicelo zeselula zokukhetha amakhuphoni edigital digital
Njengoba kungakholakali njengoba kubonakala sengathi, izitolo eziningi eziku-inthanethi ezikhona kuwebhu zinikeza ithuba lokusebenzisa amakhuphoni edigital digital; umzuzu ofanayo lapho ukukhokhelwa komkhiqizo noma kwensizakalo kuzokwenziwa, kuzohlala kukhona njalo isikhala esigodliwe esizinikezele ekubhaleni ikhodi yalolu hlobo lwamakhuphoni. Kuzofanele siye kumasayithi ambalwa akhethekile ukuze sikwazi ukubheka ikhodi yalesi sigqebhezana.
1, Ikhuphoni Sherpa
Ngalolu hlobo lwesicelo seselula uzoba nethuba lokusebenzisa womabili amadivayisi we-Android ne-iOS kuzixhumanisi zawo; uma usuyifaka kukhompyutha efanele, ngaphandle kokuthi ubhalise i-akhawunti yamahhala ungadlulisa amehlo kwizigaba ezahlukahlukene kuye khetha isigqebhezana esifanele sedijithali. Zizohambisana nezitolo ezahlukahlukene eziku-inthanethi, ngakho-ke ungagcina noma yiziphi zazo "njengezintandokazi" ngenkanyezi etholakala kwelinye lamakhona ayo. (Android ne-iOS)
2. Uhlelo Lokusebenza Lwamakhuphoni
Ibuye ihambisane namadivayisi weselula we-Android ne-iOS, futhi ungabhekabheka nokunikezwa okuhlukile okuphakanyiswe ngonjiniyela wayo. Uma ucabanga ukuthi enye yalawa makhuphoni edijithali inesithakazelo kumngane wakho, ungawabelana nawo kalula. (Android y iOS)
Ngokuya ngokuthi ukuphi, mhlawumbe ukumbozwa kwaleli thuluzi kungakusiza kakhulu. Okufanayo ngokukhethekile ukuletha Iziphesheli Zokudla; ungapheqa ngayinye yamakhuphoni edijithali bese uwagcina ezitolo zakho ozithandayo. Lapho kukhona okunikezwayo kuzo, uzothola isaziso ngokushesha ukuze ukwazi ukusebenzisa izaphulelo zabo. (Android y iOS)
Ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza zeselula, kulokhu uzoba nethuba lokukwenza thola izaphulelo ezingaguquki ezisukela ku- $ 4 kuye ku- $ 10 njengesitifiketi sesipho, into ongayisebenzisa futhi uyisebenzise lapho uyokudla kwenye yezindawo zokudlela zasendaweni okuyingxenye yokunyuswa kwabo. (Android ne-iOS)
Lesi esinye sezicelo zeselula ezithakazelisa kakhulu esizitholile; Ngokuya ngakho, uzoba nethuba lokuthi thola inani elithile lemali njengembuyiselo oyisebenzisile. Ukuphela kwento okudingeka uyenze ukuthatha isithombe seresidi yokuthenga bese usilayisha kulolu hlelo lokusebenza lweselula. Uma weqa u- $ 20, imali izobuyiselwa kuwe ngokuzenzakalela. (Android y iOS)
Uma uthole inani elikhulu lamakhuphoni esaphulelo, ungawalondoloza futhi leli thuluzi liwahlaziye. Inethuba lokukhuluma ngawe asebenzayo futhi asevele aphelelwe yisikhathi. (Android y iOS)
7. ICartwheel nguTarget
Uma uke wabona ezinye iziphakamiso emakethe ezikuthandayo ngamaphuzu athe xaxa ukuze uzuze, ngaleli thuluzi ungazifaka ekhompyutheni;: zizongezwa ngokuzenzakalela, ukuze uzisebenzise ekuthengeni okuzayo nakumaphromoshini athile akhethiwe. (I-Android ne-iOS)
Ngalolu hlelo lokusebenza uzoba nethuba lokubuyekeza okunikezwayo okuhlukahlukene bese uthola ukuthi yikuphi okuhle kakhulu noma okukufanele kakhulu. (Android y iOS)
Ngalolu hlobo lwesicelo seselula uzoba nethuba lokuthola izaphulelo zedina ezindaweni zokudlela ezahlukahlukene kanye nokuthenga ezitolo ezithengisa. (Android y iOS)
Kulabo abasebenzisa imoto lokhu kungaba yindlela enhle kakhulu, njengoba ithuluzi lizosisiza wazi ukuthi yiziphi iziteshi zegesi noma iziteshi zesevisi, njengamanje banikela ngezaphulelo zethangi eligcwele. (Android y iOS)
Ekugcineni, ngalolu hlelo lokusebenza lweselula uzoba nethuba loku gcina izimali zakho nama-akhawunti wakho usesikhathini; Ngayo, ngeke kusaba khona ukukhokha sekwedlule isikhathi, njengoba uhlelo lokusebenza lukunikeza ithuba lokuthola izikhumbuzo mayelana nesikhathi esiphezulu okufanele ukhansele ngaso isikweletu, into ezokhushulwa ikakhulukazi kulabo abasebenzisa amakhadi wesikweletu. (I-Android ne-iOS)
Ngazo zonke lezi zicelo zeselula esiziphakamisile, kungenzeka ukuthi sesivele sinalo ithuba loku babe abazuzi bezaphulelo ezimbalwa ekuthengeni lokho sikwenza nokuphatha ukuphatha imali kangcono emaphaketheni ethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Izicelo eziyi-11 zeselula ezizosisiza ukuthi songe imali
Ngiyazi ngolunye uhlelo lokusebenza ukonga imali: ibizwa ngeWeplan futhi ikuvumela ukuthi uqhathanise wonke amanani wezingcingo emakethe futhi uthole ukuthi yikuphi okuhle kakhulu kuwe ngokusetshenziswa kwakho. Futhi kuyithuluzi lokulawula ukusetshenziswa okukhulu. Kunconywe kakhulu. Ingalandwa mahhala ku-Google Play.
URodrigo Ivan Pacheco kusho
Umnikelo omuhle kakhulu u-Alberto wami othandekayo. Ngisanda kuyibona ngaku-direction ephakanyisiwe futhi ingalawula ukusetshenziswa kwe-sms njengoba isho. Ngiyabonga futhi futhi ibhalisiwe lapha, ngenhlalakahle yethu sonke esiyisebenzisa nsuku zonke.
Ungazikhipha kanjani izithombe kuvidiyo ku-iPhone
Ukucabanga kwabadlali abaningi beThe Last of Us